PressReader - Isolezwe: 2019-01-10 - Ulaxaze uKhongolose wajoyina i-ATM
Ulaxaze uKhongolose wajoyina i-ATM
Isolezwe - 2019-01-10 - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE
OWAYEKHULUMELA uhulumeni wakuleli uMnuz Mzwanele Manyi ulaxaze uKhongolose izolo wajoyina i-African Transformation Movement (ATM).
UManyi uthe isinqumo sokuthi ashiye i-ANC yingoba le nhlangano isiphambene nemigomo eyasungulwa ngaphansi kwayo.
Uthe lokhu kubonakala ngokuthi ingqungquthela ifike inqume bese lezo zinqumo zingalandelelwa ngubuholi obuphezulu. “Ngifinyelele esinqumeni sokuthi ngoba i-ANC isikhathele, isiyacwila nokuthi ayisasebenzi ngokwezimiso zayo ukuthi ngiyishiye le nhlangano ngoba ibuyisela emuva lokho okwalwelwa kanzima. Le nhlangano isilahlekelwe wukwethenjwa ngokuhluleka ukukhulula abantu bakuleli.”
Uthe unyaka odlule iwona omenze wanquma ukushiya i-ANC. “Asivumele i-ANC ithathe impesheni ukuze kufakwe abantu abasha, abanegazi elisheshayo. I-ATM yintsha ayinawo umlando wenkohlakalo nezethembiso ezingafezwa.”
Leli qembu lasungulwa nyakenye nguMnuz Vuyolwethu Zungula nabanye abaholi beSA Council of Messianic Churches of Christ. UManyi uyilungu leBantu Church of Christ abaholi bayo abasungule i-ATM.
Ememezela ukujoyina leli qembu uManyi ukhale ngokuthi i-ANC ayenzanga lutho ngesikhathi iMultichoice inqamula ukusebenza kwe-ANN7 emoyeni.
Uthe abasebenzi abangu-500 balahlekelwa ngumsebenzi ngesikhathi kuvalwa lesi siteshi sethelevishini akuthenga emndenini wakwaGupta nephepha iNew Age ngoR450 million. “I-ANC ayishongo lutho abantu belahlekelwa ngumsebenzi. I-ANC ayilaleli kunamadolobha angalungisiwe sekuphele inqwaba yeminyaka kwatholakala intando yeningi. Abafundi baphonseka ezindlini zangasese bafe kodwa akekho umuntu othathelwa izinyathelo ngalokho,” kusho uManyi.
Uthe ezinye zezizathu ezenze ashiye uKhongolose ngukuthi i-ANC ibonakala ingafuni ukuthatha umhlaba ngaphandle kwezinxephezelo okungenye yezinto okwavunyelwana ngazo eNasrec.
Okunye ngukuthi le nhlangano ayifuni ukubhekana nezinto ezithinta izinguquko.
Uthe kodwa akazange ajoyine leli qembu ngoba eyilungu leBantu Church of Christ wathi ibandla aliyona ingxenye yaleli qembu.
UManyi noMnuz Hlaudi Motsoeneng ngabanye babantu abashiye uKhongolose njengoba ngoDisemba uMotsoeneng wasungula iqembu elisha.
UMotsoeneng wathi iqembu lakhe i-African Content Movement lizogxila ekuqedeni indlala, ukubuyiswa komhlaba ukufundisa abangafundile nokunye.